myothuzar in Blockchain Gaming •5days ago
Today, I played rising star game. I have been playing this game for 8 days. My level and starbits are gradually increasing in the game.I am happy to see my improvement in the game.
Now, I reached level 9, and I got 3094 starbits. There are currently 109 fans,1 skill and 1 im. Today, I also played Illegal busking mission, open mic night mission and mid week support slot mission. I repeatedly play these three missions.
ဒီနေ့ ကျွန်မ rising starဂိမ်းကို ကစားခဲ့ပါတယ်။ ဤဂိမ်းကို ကစားတာ ၈ ရက်ကြာပါပြီ။ ကျွန်မရဲ့level နဲ့ starbits များလည်း ဂိမ်းထဲတွင်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာပါပြီ။ ဂိမ်းတွင် ကျွန်မရဲ့ တိုးတက်မှုကိုမြင်ရသည့်အတွက် ဝမ်းသာမိပါတယ်။
ယခု ကျွန်မ level9သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး 3094 starbits ရရှိခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိတွင် ပရိသတ် 109၊ 1skill နှင့် 1im ရှိပါတယ်။ ဒီနေ့ Illegal busking mission၊ open mic night mission နဲ့ mid week support slot mission တို့ကိုလည်း ကစားခဲ့ပါတယ်။ ဒီမစ်ရှင်သုံးခုကို ကျွန်မ အကြိမ်ကြိမ် ကစားပါတယ်။
#risingstar #proofofbrain #trafficinsider #ocd #archon #neoxian #cent #hive-engine #oneup
5 days ago in Blockchain Gaming by myothuzar
suhlaing5days ago
ဟုတ် ကျေးဇူး အမ။
tin.aung.soe4days ago
RS ဘက် ခရီးဆက်လာပြိပေါ့
@tin.aung.soe(2/3) gave you LUV. H-E tools | discord | community | <>< daily
ခုတော့ rs ဘက်ပါ ခြေဆန့်လာရတယ်။
golden.future tipped myothuzar (x1)
@risingstargame(3/10) tipped @myothuzar (x1)
Rising Star မှာလည်း ကြိုးစားနေပြီပေါ့ !PIZZA
ဟုတ်။ ကြိုးစားနေပြီ ။
အတော်လေး ကြိုးစားနေပြီပဲ !LUV !PIZZA အားရတယ်ဗျို့
@callmemaungthan, I sent you an $LOLZ on behalf of @myothuzar
ကဒ်ဝယ်ဖို့ Starbit တွေစုအုံး...ဝယ်ဆော့လေ ပိုကောင်းလေပဲ...!LOLZ
ဟုတ်။ စုနေတယ်။ခုတော့ ၃၀၀၀ ကျော်ပဲ ရသေးတယ် ။
risingstargame 15 hours ago